Wax ka barro 5 waxyaabood oo ragga u horseeda caafimaad darro! | afrikada news online
Wax ka barro 5 waxyaabood oo ragga u horseeda caafimaad darro!
Jan 5, 2017 - jawaab
1:- Maydhashada biyaha kulul waxa la ogaaday in raggu uga badan yihiin ku maydhashada biyaha kulul ama diiran. Biyaha kulul ee qofku qabatimo inuu ku maydho had iyo jeer waxa cilmi baadhayaashu ku tilmaameen in leedahay halis dhanka caaafimaadka ah. Oo ay ugu weyntahay yaraynta habka ragganimo iyo koriimada dareenka ragga.
2:- Ku fadhiisiga meelaha kulul Waxa ay cilmibaadhayaashu tallo ku bixiyeen inay raggu ka digtoonaadaan in muddo fara badan ay ku fadhiiistaan meelaha kulul, iyo isticmaalka muddada dheer lap-topka oo la saarto jilbaha ama lugaha.
3:- Nadaafada musqulaha “ma iska dhaqdaa gacmaha marka aad booqato musqulaha” waxa la muujiyay in raggu uga yar yihiin haweenka marka ay timaado nadaafada musqusha, iyadoo la leeyahay mid ka mid ah saddexdii ragg ah ee isticmaala suuliga, isaga oo maydhin gacmaha ayuu iska wataa hawlihiisii caadiga ahaa, iyada oo la xusay in jeermiska gacamaha ay yihiin kuwa ugu badan ee keena halista dhanka caafimaadka.
4:- Daryeelka xagga ilkaha waxa la ogaaday in 66% oo kaliya ayaa ragga ilkahooda nadiifiya cadeyda maalinkii laba jeer, iyada oo taasi la bar-bar dhigay 86% oo haweenka ah, waxa la ogaaday in haweenku laba jibaar uga badan yihiin ragga inay la socdaan xaalada caafimaad ee ilkahooda, iyada oo la xusay in daryeel la’aanta ilkaha ay keeni karto xanuun kala duwan.
5:- Cuntada deg-dega ah (fast food) waxa la ogaaday in 47% ragga ka mid ah ay cunaan cuntooyinka deg-deg ah, ugu yaraan hal mar todobaadkii. Cuntooyinkaa sida deg-deg ah loo diyaariyay, waxa la sheegay in haweenku ay ragga aad ugu yaryihiin, iyadoo xadiga haween ee sidaasi sameysa ay yihiin 35%.
Cuntooyinka deg-deg lagu diyaariyaa ee ka duwan kuwa guryaha lagu kariyo, waxa ay ka faaido ama nafci yar yihiin kuwa sida caadiga ah guriga loogu diyaariyo, waxaana la sheegay in ay ku badan yihiin waxyaabo caafimaad ahaan wanaagsanyn, sida saliidu ay ku badan tahay, waxayaabo badan oo nafaqo ahaan u lahaa jidhka oo waxtar ku siyaadin lahaa ay ku yar yihiin.